Kooxda Asmara iyo Qalbi dhagax | allsanaag
Kooxda Asmara iyo Qalbi dhagax
8th December 2021 admin Category :
Sakariye Xaaji Maxamuud oo horay u ahaa gudoomiye ku xigeenkii ururkii argagixisada ee Isbahaysiga dib u xoraynta ee lagu soo dhisay Asmara, waqtigii uu Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa Cabdulaahi Yuusuf ayaa maanta warbaahinta ka hadlay. Ururkaaaas Isbahaysiga dib u xoraynya ee Asmara lagu soo dhisay ayaa markii danbe isu bedelay Maxaakiimta oo uu weli ka sii tisnaa sakeriye markii danbeba ururkaasi wuxuu sii noqday Alshabaab.
Maalmihii sanadkii 2008, dhalinyarada reer Puntland ay dhiiga u dadinayeen si loo helo Qaran Soomaaliyeed oo suuqyada Muqdisho maydkooda lagu jiid jiidayey, Zakariye Xaaji isagu suuqyada Ingiriiska ayuu Afgaanistaan uga madaharaadayey. Hoos ka akahriso
Axad, March 16, 2008 Dad gaaraya 10,000 oo dibad-baxayaal ah ayaa waxaa ay isugu soo baxeen fagaaraha Trafalgar Square ee ku yaala Magaaladda London is ay u xusaan sanad guuradda 5aad ee kasoo wareegtay duulaankii dalkaasi Ciraaq lagu qaaday.
Dibad-baxayaashu waxaa ay ku dhawaaqayeen ama ay codsanayeen in Ciidamada dalalkaasi jooga ay isaga baxaan Ciraaq iyo Afqaanistan iyo xuduuda qaza in dib loo furo.
Inkastoo dadka intooda badan ay ahaayeen Dadyowga dalkan u dhashay ee sida wayn u diidan duulaankii ciraaq hadana waxaa si wayn uga qaybgalay Jaaliyadaha Ciraaq, Afqaanistaan, Flastiin iyo Soomaali.
George Galloway oo kamid ah Mudanayaasha baarlamanka dalkan ayaa waxaa uu halkaasi uga hadlay dhibaatooyinka ay Maraykanka iyo Britain ku hayaan dalalka Ciraaq iyo Afqaanistaan iyo duulaanka lala damacsan yahay dalka iiraan.
Sakariye Xaaji Maxamuud oo kamid ah Isbahaysiga dib u xoraynta ee lagu soo dhisay Asmara ayaa kamid ahaa Dadkii Soomaalida ee aan goobta kula kulmay isagoo si wayn uga hadlay Bur burka ay Ciidanka Ethiopia iyo Maraykanku ka wadaan dalka Soomaaliya.
Peer Baroness oo ka tirsan Liberal Democrat ayaa isna kamid ahaa Mas’uuliyiinta sida wayn u qeexay in ay jireen waxyaabo la is daba mariyay ka hor dagaalka intii aan lagu qaadin ciraaq.
Ridwaan Haji Abdiwali
← Magac Hawiye ayaan ku saxiixay heshiiska Gobolada Sool iyo Sanaag →